Xog Xasaasi Ah:- Mas’uuliyiin Ka Tirsan Puntland oo Isku Dhiibay Somaliland – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Xog Xasaasi Ah:- Mas’uuliyiin Ka Tirsan Puntland oo Isku Dhiibay Somaliland
Iyadoo dhaq dhaqaaq ciidan uu ka taagnaa mudooyinkii danbe deegaanka Tukaraq iyo sido kale tuulooyin hoos taga, ayna sii xoogeysanayeen xiisada dagaal ee u dhaxeysa maamulada Somaliland iyo Puntland, ayaa wararkii ugu danbeeyay ku waramayaan in deegaano katirsan mamulka Puntland ay gaareen ciidamo katirsan kuwa maamulka Somaliland oo aagagaasi ka waday dhaq-dhaqaaqyo militari.
Ciidanka Somaliland ee gaaray aagaasi ayaa la sheegay ujeedkooda inuu yahay sidii ay usoo galbin lahayeen masuuliyiinta katirsan maamulka Puntland oo doonaya in la geeyo deegaanada Somaliland.
Ilo lagu kalsoon yahay oo ku sugan Gobalka Sool ayaa Radio Simba u sheegay Shakhsiyaadka isku dhiibay dhanka Somaliland, inuu kamid yahay taliyihii qaybta Booliska Puntland ee gobolka Sool Aadan Foorteyn iyo sidoo kale Maayer ku xigeenka deegaanka Boocame, kadib markii dalabyo kaga yimid Somaliland.
Waxaa maanta Guriga degmada iyo kan shirarka gollaha deegaanka Boocame lagu arkayey muddo dheer kadib, calanka Somaliland oo ka dul ba banaya kaas oo laga taagay goor habeenimo ah isla markaa taagista calankaasi ay ka dhalatay buuq xoogan ka dhex abuurtay madaxda deegaankaasi iyo maamulka gobolka Sool oo ugu dambeyntii khilaaf uu soo kala dhex galay. Sid Simba wararka hoose ay ku heleyso.
Ilo dadka deegaanka ayaa sido kale Simba u sheegay in Taliye Foorteyn iyo Maayer ku xigeenka degmada Boocame iyagu ay ahaayeen maskaxda ka dambaysay qorshahaasi, iyagoona xiligani ku wajahan sida la sheegay magaalada Hargeysa oo xilal kala duwan looga soo magacaabi doono.
Taliyihii qaybta Booliska Puntland ee gobolka Sool Aadan Foorteyn ayaa laga yaabaa in loo magacaabo taliyaha ciidamada Booliska Somaliland ee deegaanka Tukaraq halka wararka qaarkoodna ay sheegayaan in uu isagu u ololaynayo shakhsi kale oo ay isku garab yihiin sababo la xidhiidha xilkaas oo uusan helaynin maadaama Maayerka deegaanka Tukaraq uu madaxweynaha maamulka Somaliland ka dhigay shakhsi ay isku dhow yihiin Mr. Foorteyn.
Marka laga yimaado xiisadaha dagaal ee ka dhex taagan Puntland iyo Somaliland ayaa waxaa jira olole xoogan oo labada dhinac uu mid walbaaba ugu jiro hanashada iyo maamulka deegaanadaasi,waxaana xusid mudan in degmada Boocame ay u jirto caasimada Puntland ee Garoowe 60 KM oo kaliya, taas oo la wareegisteeda dhabar jab xoogan ku noqon karta mamulka madaxweyne Gaas oo isagu ilaa iyo hada aanan fulin balanqaadyadii soo celinta gobolka Sool oo uu xiligii ololihiisa doorashada balanqaaday.